Waraansi Tigiraay Keessaa Akka Hatattamaan Dhaabatu Tokkummaan Mootummootaa fi Yunaayitid Iteetis Gaafatan
Bitootessa 05, 2021
Faayilii - Baqattota Itoophiyaa Mooraa baqattootaa Sudaan jiran
Yeroo Tigiraay keessatti namoota hidhannoo hin qabne yokaan siiviloota irratti hookkarri geggeessamaa jira, jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti Yunaayitid Isteetisii fi Tokkummaan Mootummootaa, waraansi naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuu fi qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamuuf waamicha dhiheessan.
Loltoonni Federaalaa Itiyoophiyaa muummicha-ministaraa Abiyyi Ahimadiin bobbaafaman, humnoota Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay, ka duraan naannoo sana bulchaa jiruu waraanaa jiran. Namoota kuma hedduu tu Tigiraay keessatti ajjeesame. Akka Tokkummaan Mootummootaa jedhutti, waraansi sun jalqabamuu durayyuu naannoo Tigiraay keessa namoota kuma dhibba hedduu tu gargaarsa nyaataa kennamutti hirkatee jiraata.
Hooggantuun Koomishina Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummootaa, Misheel Baachileet, hookkara humnaan gudeeddii fi loogii saakaa irratti hundeessamee geggeessame, ajjeechaa fi saaminsa naannoo sana keessatti geggeessame – jedhan eeruudhaan, akka hatattamaan Tigiraay keessatti qorannaan gareen walabaan geggeessamu jabeessanii dubbatan. Tokkummaa Mootummootaatti, Ambaasaddarri Yunaayitid Isteeetis haaraan, Liindaa Toomaas Griinis yaadichatti waliigalan.